विवेकशील साझाका सदस्यलाई संयोजक रवीन्द्र मिश्रको खुलापत्र ! फुटेर जाँदा जानेहरूको क्षणिक अहं त साम्य होला तर त्यसबाट समाज र देश रूपान्तरण हुँदैन
Posted on January 18, 2019 January 18, 2019 by J NP
काठमाडौं । एक साता अगाडी मात्रै एक्कासी पार्टी विभाजन भएपछि विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सदस्य र शुभेच्छुकको नाममा खुलापत्र लेखेका छन्। यसभन्दा अगाडी पनि एक प्रेमपत्र लेखेर पोष्ट गरेका थिए। मिश्रले पहिले नै हृदयदेखि नै क्षमायाचना गरेका छन्। पार्टी फुटेर जनतामाथि भएको घातप्रति ठुलो चोट पुगेको उल्लेख गरेका छन् । हेर्नुहोस मिश्रको पत्र जस्ताको तस्तै :
विवेकशील साझाका प्रिय सदस्य तथा शुभेच्छुकहरू:
सबैभन्दा पहिले म तपाईंहरूसँग ह्रिदयदेखि क्षमायाचना गर्न चाहन्छु। तपाईंहरूको हामीमाथि जुन विश्वास थियो र पार्टीमा जुन किसिमको परिस्थिति सृजना भयो त्यसबाट तपाईंहरूमा पुगेको आघात केवल व्यक्तिको पीडा, भावना, सहमति र विमतिसँगमात्र सम्वन्धित छैन।
त्यो दशकौँदेखि यो देशको रूपान्तरणका लागि हरेक नेपालीको मनमा बलेको आगोसँग सम्वन्धित छ। आफ्नो र सन्तानको भविष्यसँग सम्वन्धित छ। त्यसैले तपाईंलाई परेको आघातका लागि हामी पार्टी निर्माणमा जुटेको नेतृत्व पंक्ति नै जिम्मेवार छौं।
हामीले आफूलाई तुलनात्मकरूपमा असल मान्छे दावि गर्दागर्दै पनि हामी आखिर मान्छे नै हौं। हाम्रा कमजोरीहरू छन् र नयाँ यात्रामा हिँड्दा बेलाबखत बाटोमा अलमलियौं होला। तर मुलबाटो न त छोडेका छौं, न त छोड्ने नै छौं। घुम्तीमा आएका अलमलबाट आत्तिएर बाटो बदल्दा गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। परिस्थितिमा परेको गाँठो नफुकालेर बाहिर निस्कनेले फेरी अर्को गाँठो पार्छ या अर्को गाँठो पर्दा फेरी तर्सिएर भाग्छ। त्यसैले हामी जतिसुकै जटिलता आए पनि यो यात्रा छोड्दैनौं। र, विश्वास गर्नोस्, जसले जति नै सभ्य भाषामा दानवीकरण गर्न खोजे पनि समग्रमा हाम्रो बाटो गलत छैन। हामी ठिक दिशामा अग्रसर छौं। भएका कमजोरीहरू सुधार्दै जान्छौं।
बाहिर र भित्र केही (सबै होइन) साथीहरूको निरन्तरको एउटा प्रयास थियो – कुनै पनि हालतमा म लगायत नेतृत्वको एउटा पंक्तिलाई विफल प्रमाणित गरिदिने र केही वर्षदेखिको भिन्न नेतृत्व र शैली ठिक थियो भनेर स्थापित गर्ने। त्यो प्रयासले पार्टी निर्माणको काममा सधैं अत्यधिक जटिलता सृजना गर्यो। तर त्यो प्रयास सफल हुने संभावना न्युन भएपछि पछिल्लो स्थिति विकशित भयो, जहाँ एउटा पक्ष मरेर काम गर्थ्यो, जसका कारण देश-विदेशमा पार्टीको छवि उच्च भयो, विवेकशील साझाले साँच्चिकै देशको रूपान्तरणकारी नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने आशा सञ्चार गरायो। तर अर्को एउटा पक्ष थियो, जो भएका कामको खोटमात्र खोजेर बस्दथ्यो र पार्टी निर्माणमा होइन, निरन्तर पार्टीको विखण्डनमा योगदान गरिरहेको थियो। गर्न नहुने काम गरिसकेपछि अहिले उहाँहरूलाई गलत कदमको औचित्य दर्शाउन तथ्यहरू तोडमोड गर्ने र पूर्ण तथ्य उल्लेख नगरी विश्लेषण गर्नु पर्ने वाध्यता छ र उहाँहरूले त्यही गरिरहनुभएको छ। तर देश विदेशमा फैलिएका सम्पूर्ण सदस्य, शुभेच्छुक, जिल्ला नेता र प्रदेश संयोजकहरूको एकतावद्ध सकारात्मकताका कारण सबै मिलेर हामी यो पार्टी बचाउन सफल भयौं। त्यसैले मेरा व्यक्तिगत कमजोरीका लागि तपाईंहरूसँग क्षमा माग्दामाग्दै, हामी तपाईंहरूप्रति हार्दिक नमन गर्न चाहान्छौँ।
तपाईंहरूको साथ नभइदिएको भए नेपाल साँच्चिकै रूपान्तरण गर्न सक्ने संभावना बोकेको बैकल्पिक राजनीतिको यात्रा वाल्यावस्थामैं निमोठिने थियो। र, आफूलाई वैकल्पिक भनेर रमाउने तर देश कुनै हालतमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने एकाध पार्टीहरू बाँकी रहने थिए। मलाई पार्टी फुटाउन प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका खेलेकाहरूभन्दा पार्टी जोगाउन भित्र र बाहिर महिनौंदेखि लागिपरेका साथीहरूको बारेमा चिन्ता छ।
अनायासको एकांगी विश्लेषण, अहं र भावुकताका कारण उहाँहरू पनि अन्तिम घढीमा बहकिनुभयो भन्ने मेरो बुझाइ छ। कुनै आडम्बर र कुण्ठाबिना सकारात्मक शक्ति बोकेका ती साथीहरूको सदा भलो होस् र उहाँहरूको यो देशको रूपान्तरणमा कुनै न कुनै रूपमा ठोस भूमिका रहोस्। उहाँहरूको समय, उर्जा, पेशगत वृत्तिविकासका अवसर खेर नजाओस्।
नेपालभित्र र नेपाल बाहिर बसेका दशौं लाख नेपाली अझै पनि हामी मिलेर अगाडि बढिदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमैं छन्। त्यो भावना यत्रतत्र सर्वत्र अभिव्यक्त भएका छन्। परिपक्व राजनीति भनेको आम सर्वसाधारणको भावनाको कदर हो। न वैचारिक विमति न कुनै ठूलो मनमुटाव। आवेग र अहंकाका कारण घर छोडेर हिँड्ने सन्तानले जस्तो व्यवहार गर्ने छुट हामीलाई छैन।
मैले पहिले पनि लेखेको थिएँ, देश बनाउन देशभन्दा ठूलो मुटु चाहिन्छ। किनभने, हरेक मुटुमा देश अटाउनु पर्छ। पोख्नु पर्ने तिक्तता सबै छताछुल्ल भइसक्यो। अब पोख्न बाँकी केही पनि छैन। भन्न बाँकी पनि केही छैन। त्यसैले अझै पनि ढिलो भएको छैन। यो देशका लागि, हाम्रो भविष्य र सन्तानका लागि छाति र मुटु ठूलो बनाउँ र मिलेरै जाउँ भन्ने मेरो आग्रह छ।
फुटेर जाँदा जानेहरूको क्षणिक अहं त साम्य होला तर त्यसबाट समाज र देश रूपान्तरण हुँदैन। नेपालकै इतिहास पल्टाएर हेरे हुन्छ। यो जटिलताबाट हामी उठ्छौं र अझ सशक्तरूपमा उठ्छौं। हामी कसरी उठ्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे बुझ्न र बुझाउन यही माघ १२ गते पार्टीका सदस्यहरूको “विवेकशील साझा राष्ट्रिय सन्देश भेला” र माघ १३ गते विवेकशील साझा पार्टीमा चासो हुने सबै क्षेत्र र तप्काका सर्वसाधारणहरूका लागि काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा “विवेकशील साझा: अबको यात्रा कस्तो र कसरी” कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौं। तपाईंको उपस्थितिका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौं। ती दुई दिनका कार्यक्रमहरुपछि हामी तपाईंहरूकै जिल्लामा पनि आउनेछौं। तपाईंहरू सबैको जय होस्, नेपालको जय होस्!
मिति: ०३ माघ २०७५
छुट्टीएका मित्रहरूलाई प्रेमपत्र,हामीबीच राजनीतिक प्रेम विवाह भएको थियो: रविन्द्र मिश्र
काठमाडौं,२८ पुष । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले पार्टी फुट भएको छ । पार्टीका संयोजक मध्ये उज्जव थापाको नेतृत्वमा पार्टी फुटाएपछि विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरे ।
सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत छुटिएर जानेलाई प्रेमपत्रमा मिश्र निकै भावुक बनेका छन् ।
यस्तो छ उनको प्रेमपत्रः
खासगरी गत आम निर्वाचनपछिको एक वर्षमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा विद्यमान ‘अत्यन्तै प्रतिकूलता’का बीच पनि हामीले ठूलै उपलव्धि हासिल गर्यौं । आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा लेरायौं । सञ्चार माध्यमका कयौं बहसहरू हाम्रो प्रतिनिधित्वबिना अपुरो देखिन थाले । राजनीतिक बहसहरूमा अबको विकल्प हामी नैं हौं भन्ने निष्कर्षहरु निकालिन थाले । देशभरी संगठनहरु विस्तार हुन थाले ।
हामीले ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’को दर्शनलाई आम सर्वसाधारणसम्म पुर्यायौं, शिक्षा र स्वास्थ मूलरूपमा राज्यको दायित्व हो भन्ने धारणालाई स्थापित गर्यौ । सुसंस्कृत र मूल्यमान्यतायुक्त पार्टी नबनि देश बन्दैन भन्ने विश्वास जगायौं । आम सर्वसाधारणले हामीलाई पत्याए र साथ पनि दिए ।
तर लक्ष्यमा समानता भएरमात्र नपुग्ने रहेछ । लक्ष्यमा पुग्ने विचार र व्यवहारमा पनि समानता चाहिने रहेछ। दूर्भाग्यवश, लक्ष्य प्राप्त गर्ने हाम्रा वैचारिक चक्र र व्यवहारमा यति धेरै अन्तर रहेछन् कि हामीले जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि ती एकवद्ध हुने संभावनै रहेनछ । त्यसैले तपाईंहरू अनायासै घर छोडेर जानुभयो ।
सामाजिकरुपमा असल र भद्र देखिने हामीहरू समेत गलत निर्देशकहरुका कारण राजनीतिक मञ्चमा फरक पात्र बन्न सक्दा रहेछौं भन्ने अनुभूति भएको छ । हामी छुट्टीएको देखेर यहाँ रमाउनेहरु धेरै छन् । मन दुखाउनेहरु अझ धेरै छन् । हामी सबैलाई थाहा छ, हामीबीच अभियानकेन्द्रीत समूह मात्र बन्ने की राष्ट्रिय राजनीतिमा सुसंस्कृत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर देश रूपान्तरण गर्ने पार्टी बनाउने भन्नेमा मतभेद थियो । त्यो मतभेद छलफलबाट टुङ्गिन नसकिने तहको थिएन । तर तपाईंहरू जानुभयो र गएदेखि नै आरोपै आरोप लगाउनुभयो ।
मलाई ती पीडादायी आरोपहरूको भन्दा पनि हाम्रो सामूहिक लक्ष्य र त्यसमा पुग्नसक्ने आघातका बारे चिन्ता छ । हाम्रै जीवनकालमा यो देशको रूपान्तरण नहेरी मर्नु पर्ला भन्ने चिन्ता छ । पुष ३० गतेका लागि तय गरिएको हाम्रो भेटमा आत्मै पखालेर मनका पीडा पोखुँला भन्ने र दिनढाडै व्यक्तिगतरूमा मेरो र संगठनात्मकरूपमा पार्टीको ढाडमा हानिएको छुरीले पारेको घाउमा मल्हम लगाउँला भन्ने सोच थियो । तर अलि ढिलोसम्म पर्खिएछु, तपाईंहरू थाहै नदिइ हिँडि हाल्नुभयो ।
अब एकपल्ट भेटेर प्रेम र भ्रमका कुरा गर्ने मन छ । लक्ष्य बोकेरमात्र नहुने रहेछ, लक्ष्यमा पुग्ने शैलि र चरित्रका बारे गफ गर्ने मन छ । जीवन धेरै बाँकी छ, यात्रा लामो छ । तर देश रूपान्तरणको गन्तव्य भने मैले बदलिँदो परिवेशका कारण झन, झन छोटो देख्न थालेको छु । त्यो नजिकै देखिन थालेको गन्तव्यलाई म विगार्ने पक्षमा छैन । सिँगो देश बनाउन साऽऽऽनो मुटु लिएर हुन्न । देश बनाउन देशभन्दा ठूलो मुट चाहिन् । सँगसँगै इमानदारी, क्षमता, समूहमा काम गर्ने ढंग पनि चाहिन्छ । धेरै कुरा चाहिन्छ ।
दुःख छ तर कुनै आग्रह, पुर्वाग्रह, ईर्ष्या, द्वेष छैन । कहिल्यै नआवोस् पनि । दुःखहरूचाहिँ कहिलेकाहिँ अभिव्यक्त हुनेछन् । त्यसमा अन्यथा नसम्झिदिनुहोला । तपाईंहरूले हालैका दिनहरुमा व्यक्त गरेका दुःखलाई पनि मैले अन्यथा लिएको छैन ।
छिटै बसेर चिया खाउँला । मिलेमा लामो समयदेखि जाने भनेर नगएको ओम आध्या रिसोर्ट जाउँला । के थाहा पुनर्मिलन भई पो हाल्छ कि । घाम भर्खर उदाएको अवस्था हो, बादल लाग्दैमा त्यसलाई अस्ताएको भन्न मिल्दैन। अन्यथा, हामीमा समयले लेराउने सुझबुझसँगै बाटो फेरी एकै ठाउँमा मिसिएछ भने सँगै यात्रा गरूँला । तपाईंहरूलाई नयाँ यात्राका लागि धेरैधेरै शुभकामना ! सबैको जय होस्, नेपालको जय होस् !
‘वुमेन्स टि–२० स्म्यास’को फाइनल पुग्यो नेपाल